एकै परिवारका १४ जना जेलमा, जसले २७ गैडा मारे जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
काठमाडौं । तपाइको नाम भक्तराज गिरी कि राजकुमार प्रजा ? मेरो नाम राजकुमार प्रजा नै हो । के गर्नुहुन्छ ? पहिले त गैडा मार्थे अहिले मलेसिया आएको छु । प्रहरीले पक्राउ गरेको छ कस्तो लागेको छ ? मलाई गर्व लागेको छ, इन्टरनेसनल मान्छे भएजस्तो लागेको छ । मलाई यहाँ आएर फत्राउ गर्नुभएको छ । अब के गर्नुहुन्छ ?
पहिला म अशिक्षाले गर्दा यस्तो काममा लागे, अब गैडा संरक्षणबारे जनचेताना फैलाउने काम गर्छु । माथिको संवाद नेपाल प्रहरीका अधिकारी र २ साताअघि मलेसियामा पक्राउ परेका राजकुमार प्रजाको हो । मोस्ट वान्टेड सूचीमा राखेको ४ वर्षपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ, मलेसियन प्रहरीको सहयोगमा ।
पछिल्लो चार वर्षयता उनले आफूलाई भक्तराज गिरीको नामले चिनाउँदै आएका थिए । प्रहरीबाट जोगिन उनले गिरीको नाममा पासर्पोट बनाएर मलेसिया गएका उनी २७ वटा गैडा मार्न सम्लग्न ब्यक्ति हुन । २० वटा उनी आफैँले मारेर खाग विक्री गरे । ४ वटा अरुको मारेको गैडाको खाग काटेका थिए । ३ वटा खाग अरुबाट किनेर बेचेका थिए । प्रहरीका अनुसार राजकुमार वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधमा संलग्न सबैभन्दा खुंखार व्यक्ति हुन् । दुई वर्ष अघि नै प्रहरीले उनी मलेसिया गएको थाहा पाएको थियो । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।